Home rent အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Thae Nge
1 Master bedroom +AC+Timber bed
Dinning room with cabinet
Living room with Timber Table
All rooms are covered with Polish floor.
No. 103 A ,1floor,ThanThuMar street, SiManKain Bus Stop, South Okkalapa.
With family 380000ks
Office Rent 400000ks
To contact . Ms Pyae Pyae
လမ်းမတန်း မှာအခန်းကောင်းကောင်းလေး ရှာနေသူများအတွက်
ပွဲခလဲ ပေးစရာ မလိုဘူးနော်
(သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဈေးနှင့် ၂မှတ်တိုင် သာ)
UAB bank မျက်စောင်းထိုး
Master Bed Room လျှာထိုးခင်း + ကျွန်း ကုတင်+AC
ထမင်းစားခန်း ပါကေးခင်း + နံရံကပ် ဗီဒို
ဧည့်ခန်း ပါကေးခင်း+ ကျွန်း စတီ ၁စုံ+မီးအားမြင့်စက် +ဘုရားစင်
အိမ်ရှေ့ဝရံတာ /နောက်ဖေး ၀ရံတာပါ
အိပ်ခန်း ၂ ခန်း
အပြင် ရေချိုးခန်း အိမ်သာခန်း ပါ
မိသားစု ၁လ ၃၈၀၀၀၀ ၆လ ချုပ်( စဘော်မလို)
ရုံးခန်း ၁လ ၄၀၀၀၀၀ ၆လ ချုပ် (စဘော်မလို)
ချက်ချင်း စတက် နိုင်ပါတယ်
တအိမ်လုံး ဆေးပြန် သုတ်ထား အသစ်အနေအထားပါ.
အကျိုးဆောင်ဆိုလျှင် ညှိနှိုင်းပါ မယ်.
တပုံချင်းစီ ကြည့်ချင်လျှင် cbတွင် တောင်းနိုင်ပါတယ်.
To contact . Ms Pyae Pyae 095038613
အမည်: Home rent